Igolide yatywinwe ngaBantwana Iibrokhsi ezithambileyo ze-Pin kunye ne-Epoxy Coating
Iimpawu kunye neziHlomelo
Amava eminyaka eli-15 nangaphezulu kubugcisa kunye nezipho
Material: zinc ingxubevange
Ubungakanani: malunga ne4cm
Nesingxobo umbala: igolide mbumbulu
Icala elingasemva: umva ophantsi ngepini yokhuseleko
Packaging: Iibhegi ezininzi / ikhadi elixhaswayo lesiko.
Inkqubo yobugcisa: ukubumba, ukufa, ukupholisha, ukugoba, i-eamel ethambileyo, i-epoxy, i-QC, ukupakisha.
Umsebenzi wobugcisa: i-enamel ethambileyo + epoxy
iphedi yoqweqwe lwawo, iibheji, imbasa, ingqekembe, isitshixo, inja tag, cufflinks, ibhanti bopha, uphawu lwencwadi, njl.
Ifayile yoyilo ekhoyo
IJPG, PNG, PDF, AI, CDR, PSD, njl.
i-zinc alloy, i-aluminium, isinyithi, isinyithi, ubhedu, ubhedu, isilivere, njl
Uluhlu lweSiko lesiqhelo
1-20cm, okanye obunye ubungakanani ngokuxhomekeke kwimfuno yakho.
Uluhlu lweSiko lokuTyeba
1-10mm, okanye obunye ubukhulu kuxhomekeke kwimfuno yakho.
i-nickel / i-nickel emnyama / i-antique nickel / igolide / i-matte yegolide / igolide yegolide / i-antique yegolide / isilivere / ubhedu / i-antique yesilivere / i-chrome, njl.
bephosa-kufa, bexhentsa, ngasekhohlo, njl kuxhomekeke kwizinto eziphathekayo.
I-enamel ethambileyo, i-enamel enzima, ushicilelo, i-laser, njl.
Ifomathi yoyilo lwesiko
Ixesha isampuli Custom
Iintsuku ezili-10-15 emva kokuba ubugcisa bedijithali buvunyiwe.
Ubungqina bomsebenzi wasimahla kunye nohlaziyo
Iisampuli zesiko zasimahla
Ixesha elifutshane lokutshintsha
1. Iibheji zesiko lesiqhelo: ipini yoqweqwe oluqinileyo, ipinki yoqweqwe oluthambileyo, i-enamel ethambileyo
2. Iingqekembe zesiNtu: Iingqekembe zeAntique, umngeni wengqekembe, imali yesikhumbuzo, ingqekembe yamapolisa, ingqekembe yomkhosi njl.
3. IiMedali zesiko: imbasa yezemidlalo, imbasa yemarathon, iimbasa zomkhosi, imbasa kunye nendebe, njl.
4. Izitshixo zamaSiko ngokwezifiso: I-enamel keychain, ilogo keychain, isitshixo semoto, isitshixo sokuvula ibhotile, isitshixo sokuvula umnyango, njl.
5.Iibhanti zebhanti zesiko, iiklip zesiko, ii-cufflink zesiko, iithegi zesiko, njl.
Jiangxi Sanjia Crafts & Izipho Co., Ltd.kuyinto ISO kunye TUV mveliso eqinisekisiweyo.
Njengomenzi wamava atyebileyo kumzi mveliso wezandla zentsimbi kunye nezipho, sigxile kwinkonzo yokuvelisa ngokwesiko izikhonkwane ze-enamel, ibheji kunye nomfuziselo, izitshixo, iimedali zezemidlalo, iimali zemali zesikhumbuzo, iitagi zesinyithi, iibhukumaka, njl.
Ngothungelwano olupheleleyo lweshishini, sinokubonelela ngenkonzo enye yokumisa kwaye sigqibe ngokuzimeleyo yonke inkqubo yemveliso kuyilo, iinkqubo, ukubumba, ukusika / ukugalela, ukupholisha, ukuhlanganisa, ukugoba, ukufaka imibala kwi-QC kunye nokupakisha. Oku kusinika ithuba elihle ekuboneleleni ngolawulo lweendleko ezichanekileyo kunye nolawulo lomgangatho kubathengi kumanqanaba ahlukeneyo eemfuno.
Uninzi lwabasebenzi bethu abanezakhono banamava angaphezu kweminyaka eli-10 kule nkalo kwaye benza igalelo elikhulu kwinkampani yethu ekunikezeleni ngenkonzo yobungcali kunye neemveliso ezonelisekileyo kubaxumi bethu ekhaya nakumazwe aphesheya.
Ukubambelela kumgaqo weshishini weenzuzo ezifanayo, siye saba nodumo oluthembekileyo phakathi kwabathengi bethu ziinkonzo zethu zobungcali, iimveliso ezisemgangathweni kunye namaxabiso aphantsi. Sibamkela ngokufudumeleyo abathengi ngakumbi nangakumbi ukuseka intsebenziswano ixesha elide kunye nathi. Abasebenzi bethu abaqeqeshiweyo bahlala befumaneka ukuba baxoxe ngeemfuno zakho kwaye baqinisekise ukwaneliseka ngokupheleleyo kwabathengi.
1. Ingaba ungumzi mveliso?
EWE, singumzi-mveliso oneziqinisekiso ze-ISO kunye nezeTUV.
2. Sinombono olungileyo, ngaba ungasiyila?
Sinokukwenzela umsebenzi wobugcisa ngokweefayile ezilandelayo: iJPG, iPNG, iPDF, iAI, iCDR, njl.
3. uthini nge-MOQ?
4. Ndingayifumana ixesha elingakanani emva kokuba ndibeke iodolo?
Ixesha lokutshintsha lixhomekeke kubungakanani beodolo kunye nobugcisa obahlukeneyo.
Ngokwesiqhelo, ijikeleze iveki enye kwiisampulu emva kokuba umsebenzi wobugcisa uqinisekisiwe; Iintsuku 10-20 imveliso isambuku.
5. Ndingathembela njani kumgangatho wakho?
Ngaphambi kokuthunyelwa, siza kukubonisa imifanekiso kunye neevidiyo kuzo zonke izinto ezijikeleze uhlolo, naziphi na iingxaki esinokuzilungisa ngaphambi kokuthunyelwa.
Nokuba iingxaki zikhona xa ufumana imveliso, sinenkonzo ebalaseleyo emva kokuthengisa ukuze sisebenze nesona sisombululo kude kube wanelisekile.
Ngapha koko, sicebisa abathengi ukuba benze uMyalelo woQinisekiso lwezoRhwebo ukuze iodolo nganye ibe phantsi kokhuseleko lweqela leAlibaba, elibonelela ngokhuseleko kubo bobabini.
6. Njani malunga nemigaqo yentlawulo?
Singayamkela iT / T, PayPal, WU, MG, njl. 30% -50% idipozithi ukuqala iodolo, ibhalansi inokugqitywa ngaphambi kokuthunyelwa. Naziphi na ezinye iimfuno zemiqathango yokuhlawula kunokuxoxiswana ngazo.
7.Ngaba ndingayikhetha indlela yokuhambisa?
Kunjalo! NguLwandle, ngoMoya okanye ngeeKhuriya: I-FedEx, i-TNT, i-DHL, i-UPS, njl. Unokukhetha naluphi na uhlobo lwendlela yokuthumela efanelekileyo kuwe.
Egqithileyo Igolide Plated iMedali yeeMedali ezenziwe nge-Soft Enamel Award Badge
Okulandelayo: Igolide Plated Metal Ibheji Soft wayesebenzisa Pin
Singumvelisi wezikhonkwane ze-enamel, izikhonkwane ze-lapel, iibheji, iimali zemali, iimedali, ii-keychains, iithegi, ii-cufflinks, njl. Endaweni yomthengisi.
Ii-Pls zisizisela uyilo kunye neeparameter ezithile ukuba ufuna ixabiso lesicatshulwa.
Zonke iimveliso eziboniswe apha ziyilo olwenziwe ngokwezifiso. Zenzelwe kuphela ukubhekisa kubugcisa, hayi ukuthengisa.
Wamkelekile ukuthumela kuthi umbuzo ukuze ufumane ixabiso lesimahla kunye nobungqina bobugcisa basimahla.
Ikati Enamel Pin
Ingubo yePin Brooch
Iphepha eliqhelekileyo lesiko
Iiseti zePineli zo-Enamel
Lapel Pin Nge Chain
Izikhonkwane zoMkhosi woMkhosi
Umgangatho wokuqala, oPhezulu weNkonzo
I-Hard Enamel Pin Uyilo oluSebenzayo lweSalathiso
Custom wayesebenzisa Pin uMenzi Design Yellow Flow ...
Igolide ngumfanekiswanaamel wayesebenzisa Brooch imbasa Custom Des ...
Uyilo oluqhelekileyo lweBhola yeBhola ekhatywayo yeZinc ...
Elungiselelweyo Ibheji Cwangcisa Ngokwezifiso Ilogo Gold Silver Br ...
Metal Crafts Gold ngumfanekiswana Pin Pin Custom Desig ...
Idilesi: H3 Road, Light Light base base Lutian Industrial Park, Poyang County, Shangrao City, Jiangxi kwiPhondo, 333110 CN.
Ihlokondiba: +86 13632628171
Umnxeba: +86 0793 666 5008